HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bengali Bichlamar Bicol Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitumbuka Cinghalais Danoà Drehu Efik Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Ga Goujrati Goun Grika Groenlandey Guarani Géorgien Hebreo Hiligaynon Hindi Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kambôdzianina Kannada Kazakh Kikaonde Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Kwangali Kwanyama Letonianina Lingala Litoanianina Luganda Lunda Luo Luvale Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Masedonianina Maya Ndebele Ndonga Ngabere Norvezianina Nyaneka Nzema Népali Oromo Ossète Ourdou Ouzbek Pangasinan Papiamento (Aruba) Pendjabi Persianina Poloney Portogey Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Romanianina Rosianina Sango Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swati Tagalog Tahisianina Tailandey Tamoul Tatar Tigrigna Tiorka Tseky Tshiluba Tsonga Twi Tzotzil Télougou Venda Vietnamianina Wallis Waray-Waray Wolaita Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
Eritrereto izao: Nisy anti-panahy nanao fotoana tamin’ny rahalahy tanora iray, mba hiara-manompo aminy ny alahady maraina. Niantso azy anefa ny rahalahy iray ny alahady maraina, satria voan’ny lozam-piarakodia ny vadiny ka nentina haingana ho any amin’ny hopitaly. Nitady dokotera manaiky tsy hampiditra ra ilay rahalahy ka ilay anti-panahy no nantsoiny, satria anisan’ny Komity Mifandray Amin’ny Hopitaly izy io. Tsy niaraka tamin’ilay rahalahy tanora àry ilay anti-panahy fa nandeha nanampy an’ilay fianakaviana nila vonjy.
Diniho indray izao: Nisy reny mitaiza irery ny zanany roa nasain’ny mpivady iray tao amin’ny fiangonany ho any aminy. Faly erỳ izy roa vavy kely, ary efa tsy andrin’izy ireo ilay izy. Nilaza anefa izy mivady, iray andro talohan’ilay fotoana, fa misy zavatra tampoka ka tsy mety indray ilay izy. Fantatr’ilay reny tatỳ aoriana fa nasain’ny namany ho any an-tranony izy mivady tamin’io takariva io, ka nanaiky.
Tokony hitana ny tenintsika isika satria Kristianina. Tsy mety ny mivadibadi-dela ka toy ny miteny hoe: “Eny sady Tsia.” (2 Kor. 1:18) Hita amin’ireo ohatra teo anefa fa tsy mitovy ny toe-javatra rehetra. Toa tsy afa-manoatra isika indraindray fa tsy maintsy manafoana ny fotoana efa nataontsika. Izany no nanjo ny apostoly Paoly.
NENDRIKENDREHINA HOE TSY MITANA NY TENINY I PAOLY
Tao Efesosy i Paoly tamin’ny taona 55, nandritra ny diany misionera fahatelo. Nikasa hiampita ny Ranomasina Égée izy mba ho any Korinto ary avy eo ho any Makedonia. Nieritreritra ny hitsidika fanindroany ny fiangonan’i Korinto izy, angamba satria te hanangona an’ilay fanomezana hoentiny ho an’ny rahalahy any Jerosalema. (1 Kor. 16:3) Manaporofo an’izany ny 2 Korintianina 1:15, 16 hoe: “Noho izany fatokisana izany, dia nikasa ho any aminareo fanindroany aho, mba hifalianareo indray. Nikasa hankatỳ Makedonia aho rehefa avy nijanona kely tany aminareo, ary hiverina any aminareo indray rehefa avy atỳ Makedonia, ka haterinareo lavidavitra rehefa ho any Jodia.”
Toa efa nanoratra ho an’ny Korintianina i Paoly talohan’io, ary azo inoana fa efa nolazainy ilay fikasany. (1 Kor. 5:9) Reny tamin’ny ankohonan’i Kloa anefa taorian’izay, fa nisara-bazana ny fiangonan’i Korinto. (1 Kor. 1:10, 11) Nanova ny fandaharam-potoanany àry izy, ka nanapa-kevitra ho any Makedonia aloha vao ho any Korinto. Nanoratra ny Korintianina Voalohany izy mba hampahafantarana an’izany. Nanoro hevitra sy nanitsy tamim-pitiavana an’ireo Korintianina koa izy tao.—1 Kor. 16:5, 6. *
Rehefa voarain’ireo rahalahy tao Korinto ny taratasin’i Paoly, dia niampanga azy ny sasany tamin’ireo ‘apostoly tsara loatra’ tao hoe tsy mitana ny teniny izy. Niaro tena i Paoly ka nanontany hoe: “Nanao kitoatoa ve aho raha izany no fikasako? Ary izay kasaiko, araka ny nofo ve no ikasako izany mba hilazako hoe: ‘Eny e, Eny e’, dia avy eo hoe: ‘Tsia, Tsia’?”—2 Kor. 1:17; 11:5.
Tena “nanao kitoatoa” ve i Paoly? Tsia. Ilay teny nadika hoe “kitoatoa”, dia midika hoe miovaova, toy ny olona tsy azo ianteherana sy tsy mitana ny teniny. Nampisaintsaina ny Kristianina tao Korinto i Paoly rehefa nanontany hoe: “Izay kasaiko, araka ny nofo ve no ikasako izany?” Tiany hazava amin’izy ireo fa tsy hoe tsy azo ianteherana izy matoa nanova ny fandaharam-potoanany.
Nanda mafy an’ilay fiampangana azy i Paoly, ka hoy izy: “Ny teninay taminareo dia tsy hoe Eny sady Tsia. Raha ny amin’izany, dia azo itokisana Andriamanitra.” (2 Kor. 1:18) Azo antoka fa nitady izay hahasoa ny mpiara-manompo taminy tao Korinto i Paoly, rehefa nanova ny fandaharam-potoanany. Te ‘hitsimbina’ azy ireo izy. (2 Kor. 1:23) Navelany hanitsy an’izay tsy mety izy ireo, talohan’ny nahatongavany. Tanteraka ny faniriany satria reny tamin’i Titosy, raha mbola tao Makedonia izy, fa nanenina sy nibebaka ireo Korintianina noho ilay taratasiny. Tena nahafaly azy izany.—2 Kor. 6:11; 7:5-7.
ILAY “AMENA” LAZAINA AMIN’ANDRIAMANITRA
Te hilaza angamba ireo niampanga an’i Paoly hoe raha efa zatra tsy mitana ny teniny i Paoly isan’andro, dia tsy azo itokisana koa ny hafatra toriny. Nampahatsiahy an’ireo Korintianina anefa i Paoly fa nitory momba an’i Kristy izy. Hoy izy: “Tsy hoe Eny sady Tsia mantsy i Kristy Jesosy Zanak’Andriamanitra, izay notorinay sy Silvano ary Timoty teo aminareo. Fa tonga Eny ny Eny, raha ny amin’i Kristy.” (2 Kor. 1:19) Tsy azo ianteherana ve i Jesosy Kristy izay nataon’i Paoly modely? Tsy izany mihitsy. Nilaza ny marina foana i Jesosy teo amin’ny fiainany sy ny fanompoany. (Jaona 14:6; 18:37) Azo atokisana àry ny hafatra notorin’i Paoly satria toy ny an’i Jesosy, ary marina sy azo atokisana tanteraka ny zavatra notorin’i Jesosy.
“Andriamanitry ny fahamarinana” i Jehovah. (Sal. 31:5) Manaporofo an’izany ny tenin’i Paoly manaraka hoe: “Na firy na firy ny fampanantenan’Andriamanitra, dia tonga Eny ireny amin’ny alalan’ny Zanany”, dia i Kristy. Azo antoka fa ho tanteraka ny fampanantenan’i Jehovah, noho i Jesosy tsy nivadika mihitsy teto an-tany. Hoy ihany i Paoly: “Noho izany, dia amin’ny [alalan’i Jesosy] koa ny ‘Amena’ lazaina amin’Andriamanitra, mba hanomezanay voninahitra azy.” (2 Kor. 1:20) I Jesosy no “Amena”, izany hoe izy no antoka fa ho tanteraka ny fampanantenan’i Jehovah Andriamanitra rehetra.
Nitana ny teniny foana i Paoly, toa an’i Jehovah sy Jesosy izay nilaza ny marina foana. (2 Kor. 1:19) Tsy “araka ny nofo” izy rehefa nikasa hanao zavatra, izany hoe tsy niovaova hevitra. (2 Kor. 1:17) ‘Nandeha araka ny fanahy’ kosa izy. (Gal. 5:16) Nihevitra izay hahasoa ny hafa izy, ary nitana ny teniny.
MITANA NY TENINAO VE IANAO?
Matetika ny olona tsy manaraka ny toro lalan’ny Baiboly no mampanantena zavatra, nefa tsy tanterahiny ilay izy rehefa misy olana kely na zavatra mahafinaritra azy kokoa. Tsy mitana ny teniny koa ny olona eo amin’ny resaka varotra, na dia efa misy taratasy fifanarahana aza. Tsy mieritreritra intsony koa ny olona maro hoe tokony haharitra mandrakizay ny fanambadiana, izay fifaneken’olon-droa. Mihabetsaka kosa ny misara-panambadiana, ka hita fa maro no manamaivana azy io sy mieritreritra fa azo ialana mora foana izy io.—2 Tim. 3:1, 2.
Ary ianao? Mitana ny teninao ve ianao? Marina fa mety hitranga aminao ny toy ilay voalaza terỳ am-piandohana. Mety ho voatery hanafoana ny fotoana nifanaovanao tamin’ny olona ianao, noho ny antony tsy azo anoarana, fa tsy noho ianao miovaova hevitra. Kristianina anefa ianao, ka tokony hanao izay rehetra azo atao mba hanatanterahana izay nampanantenainao sy izay fifanekena nataonao. (Sal. 15:4; Mat. 5:37) Halaza ho azo itokisana ianao amin’izay, izany hoe olona mitana ny teniny sy milaza ny marina foana. (Efes. 4:15, 25; Jak. 5:12) Ho vonona kokoa hihaino anao ny olona rehefa mitory ny fahamarinana momba ny Fanjakan’Andriamanitra ianao, raha fantany hoe azo itokisana ianao isan’andro. Aoka àry ianao hitana ny teninao, ka rehefa Eny dia Eny.
^ feh. 7 Nankany Makedonia tokoa i Paoly taoriana kelin’ny nanoratany ny Korintianina Voalohany, ary tao Troasy no lalany. Tao Makedonia izy no nanoratra ny Korintianina Faharoa. (2 Kor. 2:12; 7:5) Tena nitsidika an’i Korinto izy taorian’izay.